RAHA TARDE Jesosy Kristy avy Fiangonana tao anatin’ny hanjavona TARANAKA! | LE PRÊCHEUR DU RETOUR DU ROI
Tahaka ahy, afaka nahita ny olona rehetra fa ny fampakarana ny Fiangonana dia tsy hatao ny 13 Septambra ary i Jesosy Kristy no tsy ara-batana niverina tany amin’ny 14 na 15, na amin’ny farany ny volana Septambra 2015.
Efa naminavina tany sasany ny lahatsoratra fa mety hitranga izany fiverenana tamin’izany andro izany , ary diso aho!
Tsy vao voalohany izao. Fa araka ny efa fantatrao aho fa tsy mba misy mpaminany!
Na izany aza, izany tsy midika fa izahay dia tsy amin’ny andro farany talohan’ny ny fiverenan’i Jesosy Kristy.
Kosa, ny zava-nitranga tamin’ny Septambra raha ny marina dia mahery indrindra famantarana.
Efa nahita lehibe miharatsy ny Syriana ady alalan’ny fandraisana anjara mavitrika ny tafika Rosiana sy ny matoantenin’ny atao fandraisana anjara ho an’ny andro ny tafika Sinoa.
Koa izahay nahita fa ny Papa François nanao fanambarana mampitolagaga nandritra ny diany ho any amin’ny Etazonia nandritra ny toriteny amin’ny Katedraly St Patrick ny.
Translation ny Papa fanambarana:
« Ny hazo fijaliana dia mampiseho antsika ny fomba hafa mba handrefy fahombiazana. Ny andraikitsika dia ny hamboly voa.Andriamanitra dia mahita ny vokatry ny asantsika. Ary raha indraindray ny ezaka ataontsika sy ny asa toa tsy fa tsy mamoa voa, dia tsy maintsy mahatsiaro fa izahay mpianatr’i Jesoa Kristy, sy ny fiainany, humanly miteny, dia nifarana tamin’ny tsy fahombiazana, ny tsy fahombiazan’ny amin’ny hazo fijaliana. «
Dia sahy hanambara fa ny fiainana sy ny soron’i Jesosy Kristy no nifarana tamin’ny tsy fahombiazana teo amin’ny hazo fijaliana « ny tsy fahombiazan’ny ny hazo fijaliana. »
Ny papa no fahefana ambony indrindra mpitarika ny Fiangonana Katolika, ny fanambarana tsy azo hohamaivanina.
Izany dia fandavana tanteraka ny maha-Andriamanitra an’i Jesosy Kristy sy ny dia mitovy ny fanambaràna ofisialy ny maty ny Finoana ny Vatican, ary dia toy izany no manamafy bebe kokoa ny lahatsoratra: « i Jesosy Kristy Lasa AN-javatra SY A FIZARANA NY Vatikana MUSEUM »
Ny fanambarana dia fieken-keloka fa izaho efa very finoana sy mandà an’i Jesosy Kristy.
« Mazava fa ny Fiangonana Katolika Masina dia maty tamin’ny fomba ofisialy any Etazonia tao St. Patrick ny Katedraly amin’ny thunderous tehaka. «
Ity tenin’i Papa François dia tena matanjaka ara-baiboly famantarana ny fotoana farany « Apôstazia » izay nanambara ny akaiky fiverenan’i Jesoa Kristy.
Araka ny teniny ny Papa no formalized Apôstazia Vatican crucifying ny Fiangonana Katolika Masina.
Dia niala sina ny Kristianina rehetra amin’izao tontolo izao dia ny fanamarihana momba ny « ny tsy fahombiazan’ny Jesoa Kristy » tsy mendrika ny ho mpandimby an’i Petera sy maniratsira an’Andriamanitra, Jesosy Kristy, ny fiangonana sy ny finoana.
Ho antsika Kristianina, ny Papa François no manaraka ny fanamarihana ny mpiandry tsara sy mendrika solontena an’i Kristy ety an-tany, ary na dia nanao ihany koa ny Vatican intsony ny toerana ao amin’ny Fiangonan’ny Masina Jereo ny Katolika.
Jereo Masina ao amin’ny Fiangonana Katolika ankehitriny ambara ny fiverenan’ny Tompontsika, dia Jesosy Kristy ao am-pon’ny Kristianina tsirairay.
Efa rehetra ho, ry rahalahy sy anabavy malala, izay mitandrina ny finoana sy ny tenin ‘i Jesoa Kristy.
Fa ny papa dia mitoetra ho fomba ofisialy ny Papa, ary tsy maintsy manaja azy io.
Izany dia an ‘i Jesoa Kristy, teo ny miverina, fa ny Papa François ho tompon’andraikitra; toa ny antsika rehetra ho amin’izany zavatra izany.Aza adino fa mpanota isika rehetra!
I Jesoa Kristy, izay zanakalahy tokan’ny Andriamanitra eken’ny fitiavany antsika mba ho afa-baraka, nanevateva, iharan’ny herisetra, nokapohina ary farany nohomboana tamin’ny hazo fijaliana mba hanavotra antsika ho afaka amin’ny fahotantsika.
Amin’ny alalan’ny fanatitra, ra sy ny fitiavana an’i Jesoa Kristy fa ny vavahadin’ny lanitra dia vohay izahay.
Ny fanomboana an’i Jesoa Kristy dia tsy ny vokatry ny tsy fahombiazana fa ny tena ilaina sorona izay efa nanao ny tenany ho zanak’Andriamanitra, sy hanao asa noho ny fitiavany hiala ny fahotan’ny olona rehetra izay tonga teo aminy ary dia toy izany no manamarina antsika eo anatrehan’Andriamanitra ny Ray.
Araka izay nanangana an’i Jesosy ho amin’ny fiainana rehefa afaka telo andro tao am-pasana, Andriamanitra ny fitiavana, fahafoizan-tena sy ran’i Jesosy Kristy no hanome ny famelan-keloka ary laharan-tseza eo amin’ny fiainana amin’ny fitsarana farany ireo rehetra izay ho avy i Jesoa Kristy.
Noho izany dia afaka mankafy ny fiainana mandrakizay ao amin’ny Paradisa, satria isika no namonjena ary ho mandrakizay tafaray amin’i Jesoa Kristy.
I Jesoa Kristy no hany lalana hiditra ny fanjakan’ny lanitra!
Tsy maintsy mivavaka indray, ary indray ho famonjena antsika sy mba hahazo fanampiana avy amin’Andriamanitra isan’andro izay tena ilaina ho antsika amin’izao fotoan-tsarotra ny tara.
Isika koa dia mila mivavaka ho amin’ny famonjena ny Papa François, ny olombelona rehetra, ny rahalahy sy anabavy sy ny fiverenan’ny haingana Jesosy Kristy Tompontsika
Tsy maintsy tonga saina fa ny Fiangonana izay efa ary indrisy fa mbola henjehina eto amin’izao tontolo izao, dia izao fomba ofisialy maty.
Noho izany isika no rahalahy sy anabavy malalako no nidonam-pahoriana rehetra, ary niandry fotsiny ho an’ny Tompo sy Mpanjaka an’i Jesosy Kristy.
Ny zava-misy fa efa mazava ny Papa nanda an’i Jesosy Kristy mahatoky tena nandao ny fiangonana dia milaza mafy fa ny Apôstazia dia tena tanteraka sy ankapobeny ankehitriny.
Fa izy dia mitranga ankehitriny?
Mazava ho azy ihany no afaka mitondra ny valin singa ao amin’ny torolalana tombantombana.
Ireo no tombantombana fa tsy faminaniana …!
Ho an’ny Fiangonana:
Papa François toa izao tontolo izao mba ho lasa mpitarika ny fikambanana amin’ny fivavahana rehetra. Tsy ela tokoa hamorona ny ryrganization ny R eligions mety ho antsoina hoe ny « OR » izy mba ho araka ny endrik ‘ny Firenena Mikambana « ONU. »
Tsy ilaina intsony ny milaza fa Kristianina, izay miaraka na manohana fikambanana ara-pivavahana mahaolona toy izany dia ho lavitra amin’ny fanarahana ny fampianaran’i Jesoa Kristy.
Tsy mbola niova, dia indrisy gadona amin’ny loza foana sy hanamafy hatrany hatrany mandra-fiverenan’i Jesoa Kristy.
Amin’ny ady Hara-magedona
I mijanona resy lahatra fa ny any Syria, ary mbola hitohy amin ‘ny fanafihana amin’ny Isiraely izay manomboka ny hiaina ny fanombohan’ny ady an-trano miaraka amin’ny fanafihana rehetra amin’ny Jiosy ireo antsy tampoka.
Fa ny World Toe-karena:
Na dia i Rosia sy i Shina hanangana rafitra mahaleo tena ny vola sy ny varotra, dia ho hadalana ny mino fa Etazonia dia hanaiky ny tsy azo ialana rava ny dolara mbola.
Ny Etazonia mialoha mba hahatonga antsika fa dingana mankany amin’ny iray goavana izao tontolo izao tsy misy vola ka noho izany mifototra fotsiny amin’ny bola.
Ny US te-hametraka sy tena azo inoana fa ny eran-bola ho tantanan’ny ny EDF.
Izao tontolo izao dia toy izany dia ho toy ny fanandevozana sy ny Leo dia hihazona ny General Sary nahazoan-planeta, ny Etazonia, dia ho amin’ny fomba ofisialy ny tompo ‘izao tontolo izao.
Fa ny fandaminana ny World Politika:
Dia tena mivantana amin’ny amin’ny lafiny sarintany politika fizarana ny famoronana izao tontolo izao amin’ny alalan’ny hery faran’izay lehibe:
« AMERIKA AVARATRA – ROSIA – CHINA – India – Afrika – EOROPA – Aostralia – Amerika atsimo – JAPON – KOREA »
Araka ny hitanareo ny Atsinanana tsy momba lisitra io, satria toa ny zava-drehetra dia eo amin’ny toerana ny mampiditra Eoropa Atsinanana;izay ny onjam-mpifindra monina avy toa fifanandrifian-javatra hanorim-ponenana sy hialoka tsy handeha ny hanorim-ponenana, na mialoka ao Arabia Saodita tany Ejipta na hafa firenena silamo hakitroky avo.
Aza mihevitra izany sendra tonga mba hanorim-ponenana nidina ka mialoka Eoropa nanomboka tamin’ny 1948!
Izay mazava ho azy fa mankany izay Mihevitra aho fa isika dia manao lehibe dingana.
Ny lehibe resy amin’ny tombantombana ireo dia mazava ho azy Kristianina mba ho outvoted any Eoropa.
« Ny fandrian-jaza ny finoana kristianina
Islamic lasa! «
Ny Fiangonana Katolika toa voaozona mba hanjavona ary mihevitra aho fa mety hitranga izany tao anatin’ny taranaka!
Hitantsika fa i Satana dia mpanao politika ary raha i Jesoa Kristy dia tsy mivoaka, no hahita finoana etỳ ny fiverenany. (Lioka 18: 7,8).
Toy izany ny malalako Mpirahalahy sy Mpirahavavy ao amin’i Jesosy Kristy, ilay ho avy ny fiangonana sy ny Kristianina ho avy toa ho nanaiky lembenana amin’ny lafiny sarintany politika, filazana mialoha tetikady lehibe sy mpanao politika ny planeta.
Inona no mety ary inona no tokony hataontsika!
Afaka ho amin’ny ara-dalàna mba hanohitra ny fanapahan-kevitra noraisin’ny eran ambony ireo mpanao politika amin’ny fanampiana hifidy antoko politika nanao ny ady amin’ny fifindra-monina ny fifidianana fandaharana.
Fa raha izahay kosa hitondra andraikitra ny vokany …! (Herisetra sy ady an-trano!)
Afaka ihany koa ny mampiseho sy ny fangatahana, fa Azo antoka fa isika no handeha ho amin’ny ratsy fanahy.
Koa aoka isika hahatsiaro fa i Jesoa Kristy dia nangataka anay mba hanana finoana azy, mba hanampy, mba ho tia ny namantsika sy hiverina koa ny takolakao ilany raha mamely antsika.
Noho izany ny hany fanantenana mifototra amin ‘ny finoana ny Tompo sy Mpanjaka an’i Jesosy Kristy, izay zanakalahy tokan’ny Andriamanitra izay efa nampanantena fa ho avy ka hamonjy anay hatramin’ ny farany ny fotoana.
Jesosy Kristy no nampanantena fa ho avy ka hamonjy anay hatramin’ny farany ny fotoana, ary avy eo dia matoky isika fa hiaro ny fampanantenany avy hatrany. Izy io dia azo antoka.
Hihazona ny finoany ao amin’ny Teniny, satria ny teninao no fahamarinana.
I JESOSY KRISTY no Mpanjakako
Isika rehetra dia mila mivavaka mafy noho ny fiverenany haingana isika, satria mihevitra fa ny fotoana farany dia efa natao.
Fantatro fa maro ny rahalahy sy anabavy no diso fanantenana noho ny fakàna an-keriny tsy natao tamin’ny volana Septambra 2015.
Fa ny Tompo efa antomotra ny fiverenan’ny ary angamba mety hitranga indray tamin’ity taona ity, 2015.
Maro ny famantarana mamela mba hihevitra izany, fa Andriamanitra no ilay iray hanapa-kevitra ny andro sy ny fotoana ny fiverenan’i Jesosy Kristy.
Inona no zava-dehibe ho antsika tsirairay avy dia ny mivavaka sy mangataka amin’Andriamanitra mba hanampy azy hiampita ny haizim-pito izay nanafika ny izao tontolo izao sy misakana ny hazavan ‘ny finoana ny maro ny rahalahy sy anabavy.
Aoka ny lelafon’ny ny finoantsika jiro tsara sy azo antoka avy amin’ny fitondran-tena maloto tontolo izao fandrao mandeha eny an-zavona ny fotoana.
I Jesoa Kristy no am-baravarana. Fa Andriamanitra ihany no manapa-kevitra hoe rahoviana na hisy hamely. Koa miambena, ka hitoetra ao ny fitiavan ‘i Jesoa Kristy sy amin’ny fanarahana ny lalàn’Andriamanitra.
Aoka isika ho faly, noho ny famantarana rehetra sy ny faminaniana nanambara mafy isan’andro ny akaiky fiverenan’i Jesoa Kristy.
Tandremo ny finoana fa azo antoka ny fiverenany haingana.
Amin’ny mialoha ny fiverenan’i Jesosy Kristy hivavaka sy manampy ireo izay mandefa antsika Andriamanitra.
Aoka isika dia matokia fa tia antsika Andriamanitra ary ny Fanahy Masina dia hanampy antsika isan’andro mandra-fiverenan’i Jesoa Kristy.
Tadidio fa ny mahazo ny fanampiana avy amin’Andriamanitra dia tsy maintsy manontany eto ao anatin’ny vavaka amin’ny fahadiovam-po sy ny finoana rehefa mila izany isika.
Andriamanitra dia nanome antsika safidy malalaka ka noho izany dia tsy tsehatra eo amin’ny fiainantsika raha toa ka tsy mangataka aminy.
Manasa anareo aho mba hangataka an’Andriamanitra mba hitari-dalana ny fiainana andavanandro, mba hijanona eo amin’ny lalana.
Tsy nihozongozona ny fotoana, i Jesoa Kristy no momba antsika tsy ho ela sy fiainana indray ny fiainantsika dia ho voaova.
Ny hahafantatra izay hitranga aorian’ny fiverenan’i Jesosy Kristy, dia manasa anao aho hamaky ny lahatsoratra:
Ry malala mampifaly rahalahy sy Mpirahavavy ao amin’i Kristy mampita bilaogy adiresy ny fifandraisana.
Aoka isika ho miaramila rehetra an’i Kristy sy miara-miasa amin’ny fanelezana ny tsara teny hoe « i Jesoa Kristy no ho avy indray tsy ho ela »
Miareta tory sy mivavaha.
Aoka ny fitiavana sy ny fiadanan’i Kristy Jesosy ho anareo rehetra.